Android N, oo ah nooca cusub ee Android, waxaa dhiirigaliyay macruufka 9 | Wararka IPhone
Android N, nooca cusub ee Android, waxaa dhiirrigeliyay iOS 9
Qolka Ignatius | | Android, macruufka 9
Shalay iyo ogeysiis la'aan, Google ayaa sii daayay waxa jiri doona nooca xiga ee nidaamka qalliinka Google ee aaladaha mobilada. Sidii caadada u ahayd waqtigaan, waxa kaliya ee aan ku naqaano magaceeda ugu dambeeya ayaa ah bilowga N, laakiin illaa iyo inta si rasmi ah loogu soo bandhigayo shirka soo socda ee loogu talagalay maqaarka la qaban doono dhamaadka bisha May, ma ogaan doonno wax nasiib ah, maadaama Google wuxuu ku baabtiisi doonaa qaybtan toddobaad ee Android. Isaga oo sii wadaya dhaqanka isticmaalka magacyada nacnaca, Nutela waxay u badan tahay inuu ka mid yahay magacyada la xushay, laakiin illaa inta si rasmi ah loo soo saarayo, dhammaan magacyada la sheegay waxay noqon doonaan mala-awaal.
Sida caadiga ah, nuqulkan cusubi wuxuu keenayaa hawlo cusub, qaar iyaga ka mid ah ayaa horeba loogu heli karaa qalabka soo saarayaasha qaarkood mahadsanidiin lakabyada shaqsiyadeed ee ay kudarsadaan aaladooda si shaqsiyan lookala dhigo, sida ku dhacda Samsung oo leh shaqooyin badan.
Waa kuwan qaar ka mid ah pwararka ugu muhiimsan ee nooca toddobaad ee Android ayaa noo keeni doonaQaar ka mid ah ayaa horeyba looga heli karaa IOS 9, markaa markan waxay noqon laheyd Google oo soo guuriyey macruufka.
2 Sawirka PIP ee Sawirka
3 Ogeysiisyada la hagaajiyay
4 Hagaajinta maaraynta batteriga
5 Isticmaalka xusuusta oo la hagaajiyay
6 Waxqabadka hagaajinta
Imaatinka macruufka 9, iPads-yada ugu casrisan, kuu ogolaanayaa inaad isticmaasho laba codsi shaashadda oo ay si wada jir ah ula falgalaan labadaba, wax dadka isticmaala iPad ay sugayeen muddo dheer laakiin ilaa iyo hadda Apple aysan doonayn inay hirgeliso.
Dadka isticmaala Jeilbroken way sameyn karaan, laakiin eNatiijadu ma ahayn mid dareen leh sida kan hadda la heli karo oo waddan ahaan ah. Multitasking waa mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee Android N noo keeni doono laakiin sida ku jirta iOS 9, waxaa kaliya laga heli karaa nooca loogu talagalay kiniiniyada.
Sawirka PIP ee Sawirka
Mid kale oo ka mid ah shaqooyinka ay Apple horay uga siisay macruufka 9 sidoo kale kaliya kuwa isticmaala iPad-ka waxayna noo ogolaaneysaa inaan ku daawano fiidiyowyada daaqad sabaynaysa Shaqadani waxaa laga heli karaa saldhigayada Samsung, sida shaqooyin badan laakiin la cusbooneysiintan, Waxay sidoo kale gaari doontaa dhammaan kiniiniyada Android taas oo lagu cusbooneysiin karo noocyadan ugu dambeeyay.
Ogeysiisyada la hagaajiyay
Waxayna tagayaan 3. Android N waxay na siin doontaa awood aan ku jawaabno, ku keydinno ama dib ugu dhigno ogeysiisyada aan ka helno codsiyada aan rakibnay. Shaqadani waxay la timid macruufka 8 laakiin dhab ahaantii illaa imaatinka macruufka 9 ee horumariyayaashu ma aysan awoodin inay si buuxda uga faa'iideystaan, maadaama Apple uusan oggolaan.
Hagaajinta maaraynta batteriga
Batariga, farxadda Achilles ee ciribta qalabka mobilada. Laba iyo toban waa nidaamka keydinta tamarta ee Google ay ku furtay Marshmallow, way ogolaaneysaa gal mobilkaaga nooc ka mid ah hibernation marka aynaan isticmaaleynin, taasi waa in la yiraahdo markay miiska saaran tahay iyada oo aan lagu xirin kan hadda jira. Haddii aan ku dhejino jeebkeena ama boorsada dhabarka, dareemayaasha dhaqdhaqaaqa ayaa ka hor istaagaya inuu soo galo noocan ah hurdo la'aan. Iyadoo la adeegsanayo Android N, Doze wuxuu bilaabi doonaa inuu shaqeeyo markasta oo aan damino shaashadda qalabka, isagoo ogeysiinaya kaliya ogeysiisyada muhiimka ah.
Isticmaalka xusuusta oo la hagaajiyay
Google waxay ka shaqaysay hagaajinta isticmaalka xusuusta gaar ahaan codsiyada had iyo jeer ka shaqeeya asalka, si loo wanaajiyo isticmaalka Androoid N aaladaha xasuusta yari ka haysato, in kasta oo imika casriga casriga cusubi yahay in la bixiyo inta u dhexeysa 3 ilaa 4 GB oo RAM ah, si si hufan loogu maareeyo codsiyada laga helo diyaaradda labaad, taas oo ku xidhan nooca isticmaaleyaasha aan nahay, way badan karaan.
Dabcan, nuqulkan cusub wuxuu sidoo kale keeni doonaa hagaajinta waxqabadka iyo howlgalka nidaamka adoo siinaya xasilloonida weyn ee nidaamka oo dhan. Waxqabadka hagaajinta ee xaalado badan, maadaama aysan ahayn muuqaal, waxay u muuqdaan inay ogaanayaan dadka isticmaala, taas oo ah qayb aad muhiim ugu ah khibrada isticmaalka dhammaan nidaamyada hawlgalka.
Waxaa jira meel marka lagu daro shaqooyinka cusub nidaamyada hawlgalka aysan ahayn wax fudud, iyo waxa caqliga leh ee la sameeyo ayaa ah in aad nuqul ka sameyso shaqooyin soo jiidasho leh oo laga helo nidaamyada kale ee hawlgalka si loogu daro kuwaaga. Mana aha markii ugu horeysay Google waxaa ku dhiirrigeliya IOS, mana noqon doonto markii ugu dambeysay ee ay iOS ku dhiirrigeliso Android. Shirkadaha oo dhan waa la koobiyeeyay ama dhiirigaliyay tartanka. Waxa ugu fiican ee ku saabsan waa inaan marwalba nahay lWaa isticmaaleyaasha dhamaadka ah kuwa guuleysta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 9 » Android N, nooca cusub ee Android, waxaa dhiirrigeliyay iOS 9
Hadda IOS10 waxay u baahan tahay in lagu dhiirrigeliyo Android N, oo leh marinno, barnaamijyada dibedda ah oo wax laga beddeli karo isticmaalaha.
- Deji barnaamijka asalka ah ee hawlgallada (biraawsar, boostada, xiriirada, wicitaanka, soo-saaraha)
- Nidaamka Faylka Micro, ee had iyo jeer kuma xirna daruuraha iyo xiriir internet
- Ku dheji shaashadda barnaamij go'an carruurta oo kaliya lagu furi karo qaabka, taabashada, iwm.
- Multi-app shaashadda dhammaan barnaamijyada,
Shaqada ugu sarreysa ee aad sheegaysid si aad u hagaajiso codsi ayaa muddo dheer laga heli jiray macruufka, waxaa loo yaqaan "Hagaha La Hagayo" waana laga howlgelin karaa "Helitaanka", sida isu dhufashada, SplitView horay ayey ugu jirtay iPad, ma ilaa xadkee macno ka sameyneysa iPhone-ka, wey xiiso badnaan kartaa laakiin waa la arki doonaa haddii Apple ay ku darto ...
Webserveis codsi kasta wuxuu leeyahay nidaam feylal u gaar ah, inbadan oo feylashaas ah waxaa laga heli karaa iTunes ama xitaa Wi-Fi marka laga hadlayo FileMaster. Ku dhejinta codsi go'an shaashadda waxaa laga sameyn karaa macruufka 8, waxaa loo yaqaan 'Helitaanka Hagaha'. IOS 9 waxaad ka furan kartaa feylal kasta oo codsi kastoo taageeraya, waxay aad ugu egtahay waxaad dhahdo "asal ahaan". Waa maxay isku dhufashada shaashadda ee dhammaan barnaamijyada? Ma leedahay Iphone?
Asal ahaan waxaan ula jeedaa haddii aad gujiso xiriiriyaha oo aad haysato, safari, chrome, firefox, waxay ku weydiineysaa cidda aad ka dooneyso inaad ka furto "hal mar, ama had iyo jeer" emayl ahaan, waa isku mid haddii aad gujiso dir email kuu oggolaanaya dooro ama abka aad adigu asaastid, khariidadaha iwm ...
Faylasha aad had iyo jeer dirto "wadaag" si aad faylka ugu furto barnaamij kale, laakiin haddii ay laheyd dukumiinti yar oo gudaha ah, halka ay ku yaalliin, sawirro, muusig, soo degsasho iwm ... waxay noqon laheyd wax soo saar badan, u malee IOS haddii maalin uun ay leedahay daaqad badan oo daaqad u leh barnaamijyada oo dhan, haddaba waa inaad ku kacdaa iyada oo lala wadaagayo faylka daruurta, laakiin haddii aadan haysan internet ma awoodid.
Tusaale ahaan Haddii aad u baahan tahay inaad ku beddesho sawirro laba barnaamij oo kala duwan, ma bilaabi doontid inaad dirto sawirro ceeriin ah oo leh heerka xogta ipad pro
Waa hagaag, si xun ayay u socdaan haddii ay ku dhiirrigeliyaan macruufka 9. Way fiicnaan lahayd inay ku dhiirrigelinayeen iOS 6.
Ku jawaab r56
Labada nidaamba midba midka kale ayuu nuqul ka sameeyaa, macruufka ayaa qaatay in ka badan Android si loo soo bandhigo teebabka iyo wijigyada dhinac saddexaad ah, Android ka dib intaas waxaa ku jiray Android Pay, Fingerprint API iyo waxyaabo kale, ma mudna in laga doodo cidda laga soo guuriyay ...
waad qabow tahay
haddaan ka hadalno nuqul ka…. tufaax dabada ayuu la tagaa.
Seddexdan sano, Apple wuxuu soo guuriyey waxyaabo badan oo ka mid ah Android, ogeysiisyada guddiga, widget-yada, kumbuyuutarrada qeybta 3-aad ee shaashadda.
Miyaad filaysaa inay hadda 4k shaashadaha dhigayaan ama 2k oo leh Amoled iyo biyo la’aan? hahahajjjajajajajjaja
Xamaasad-darrada kaliya ayaa wax yeeleysa ... Daacadnimo uma arko wax cusub oo ku jira macdanta IOS ama Apple
Fadlan qor maqaalka noocan ah oo uu qoro qof wax yar ka ogaanaya Android iyo waxa ay ka hadlayso. Multitasking waxay ku dhalatay Android tan iyo waagii hore, waxa hada laga hadlayo waa multiscreen aan isku mid aheyn oo waa wax ay Samsung fulisay Apple ka hor, sidaa darteed, si kastaba xaalku ha ahaadee, iOS waxaa dhiiri galin lahaa Samsung. Ka hadalka ogeysiisyada Android ee lagu dhiirrigeliyo macruufka ayaa ah, in la yiraahdo ugu yaraan, cirro. Iyo wax kale, nidaamka badbaadinta batteriga waxaa loo yaqaan 'Doze', oo leh 'Z', oo aan ahayn Laba iyo Toban.
Waxaan arkaa in waxa Doze-ku yahay nooc qoraal ah maxaa yeelay goor dambe si wanaagsan ayaa loo qoray.
Apple wuxuu sii daayaa tvOS 9.2 beta 6 loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple waxay casuumaad u dirtaa munaasabada ay ka muuqdaan iphone SE iyo 9.7 "iPad Pro